Halkan waxaa ku yaal koorsooyin kombuyuutar oo khadka tooska ah oo bilaash ah oo wata shahaadooyin kaa caawin kara inaad bilowdo xirfad dijitaal ah ama aad horumariso xirfaddaadii hore u jirtay. Waxaad kasbatay shahaado caalami ah oo xaqiijineysa inaad kaqeyb qaadatay koorsada kaa caawin doonta inaad soo jiidato macaamiil badan haddii aad tahay weriye madaxbanaan ama aad bilowdo fursad wanaagsan oo aad kuheli karto shaqo mushahar wanaagsan kuheysa xirfadaada.
Waxaad rabtaa inaad xirfad u leedahay isticmaalka kombuyuutarrada ama xarunta shaqada qoto dheer inaad gaarsiiso adeegyo iyo shaqooyin laakiin aadan aqoon sida loo bilaabo malaha ma ogid meesha laga helo agabyada kheyraadka? Waa kuwan koorsooyinka kombiyuutarka ee internetka oo kaa caawin kara.
Taasi hadda maahan arrin, dhammaan waad ku mahadsan tahay internetka.
Waxaad ku qaadan kartaa fasalo kumbuyuutar khadka tooska ah bilaash waqtigaaga iyo waqtiga kuu fudud, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa kombuyuutar iyo xiriir internet. Haa haa, waxaad ku dari kartaa hal koob oo khamri ah ama koob kafee ah liiskaas.
Daraasadda khadka tooska ah waxay noqotay wax caadi ah labadii sano ee la soo dhaafay qof walbana wuxuu go'aansan karaa inuu qaato koorso khadka tooska ah si uu u xoojiyo xirfaddooda, u bilaabo waddo cusub oo shaqo ah ama uu ku kasbado xafiiskooda, si kastaba ha noqotee, waxay ku siinaysaa dakhli badan, adigu noqo qof xirfad leh waxaadna fuulaysaa jaranjarada waxbarasho.
Waxaan haynaa hageyaal badan oo bilaash ah oo ku saabsan barashada internetka. Tilmaamahan ayaa ka goynaya koorsooyinka internetka ee cajiibka ah ee aad ku qaadan karto bilaash iyo kuwa u baahan lacag bixinta sidoo kale.
Waxaan u diyaarinay hagitaan ardayda rabta inay helaan a shahaadada degdegga ah ee tooska ah ee jaamacadaha caalamiga ah oo waxaan si faahfaahsan ugu taxnay dhowr ah jaamacadaha internetka ee Australia loogu talagalay ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha.
Kanada gudaheeda, dhowr ayaa ka jira koorsooyinka onlaynka ah ee aad ku qaadan karto bilaash oo waxaa jira dhowr ah jaamacadaha khadka tooska ah waxaad ka codsan kartaa gelitaan buuxa oo bilaash ah.
Tilmaamahan waxbarasho ee khadka tooska ah sida tan oo kale hageheenna koorsooyinka kumbuyuutarka ee bilaashka ah ee shahaadooyinka leh ayaa ah siyaabo aan uga caawinno ardayda inay helaan helitaanka qalabka wax lagu barto iyo fursadaha si ay u ballaariyaan jaangooyooyinkooda tacliimeed iyagoo u diyaargaroobaya 'suuqa lacagta'.
Si loogu daro liiska, waa inaad ogaataa inay jiraan tiro ka mid ah koorsooyinka shahaadada internetka in aad isqori karto xitaa maanta.
Tani waa da'da tiknoolajiyada iyo helitaanka xirfad kumbuyuutar ku saleysan ayaa ah mid ka mid ah xulashooyinka nolosha ee ugu fiican ee aad sameyn doontid maaddaama xirfadahan laga raadinayo ku dhowaad shirkad kasta oo halkaas ku taal, ha weynaato ama ha yaraato iyo haddii aad xirfadle u tahay waxa aad sameyso, shirkadaha tiknoolajiyada waaweyn ayaa kaa daba imaan doona adiga iyo haa, iyadoo la siin doono jeeg wanaagsan!
Shabakada kumbuyuutarku runtii way balaarantahay laakiin qayb walba oo kamida waa lama huraan waana la baran karaa. Maqaalkan, waxaad ku dooran kartaa kuwa aad rabto inaad wax ka barato (waxaad baran kartaa in ka badan hal). Waxaan la nimid ilaa 13 koorsooyin kumbuyuutar oo khadka tooska ah oo bilaash ah oo aad ka qayb qaadan karto.
Uma baahnid inaad lacag bixiso si aad u qaadato mid ka mid ah koorsooyinka, waxaana lagu siin doonaa shahaado dhammaystirka ka dib si loo caddeeyo inaad xirfad u leedahay maadadaas.
1 Koorsooyinka Kombuyuutarka ee Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Shahaadada
1.1 HORDHAC SAYNISKA KOMBUUTARKA
1.3 BARASHADA MACHINE
1.4 CODSIGA DADKA AJOOJIYAYAASHA
1.5 BARASHADA QODOBKA
1.6 Qaabdhismeedka xogta iyo ALGORITHMS
1.7 HORUMARINTA CODSASHADA WEB
1.8 WEB OO LOOGU TALAGALAY AASAASIYO
1.9 HORDHAC KOOBKA QAADASHADA
1.10 SUUQA DIGITAL
1.11 WAXYAABAHA ARDAYGA
1.12 NOQO HORUMAR KHUDBAD ANDROID
1.13 KOOXAHA GOOGLE
1.14 Gunaanad ku saabsan helitaanka koorsooyin kombiyuutar oo bilaash ah oo toos ah oo wata shahaadooyin
Koorsooyinka Kombuyuutarka ee Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Shahaadada
Hordhaca Sayniska Kombiyuutarka -Koorsada Kombuyuutarka Khadka Tooska ah
Google Analytics - Koorsada Kumbuyuutarka ee Khadka
Barashada Mashiinka - Koorsada Kumbuyuutarka ee Khadka
Koodh siinta naqshadeeyayaasha - Koorsada Kumbuyuutarka tooska ah
Barasho Qoto Dheer - Koorso Kumbuyuutar Online ah
Qaabdhismeedka Xogta iyo Algorithms - Koorsada Kumbuyuutarka tooska ah
Horumarinta Codsiga Websaydhka - Koorsada Kumbuyuutarka tooska ah
Hordhaca Xisaabinta Daruuraha - Koorsada Kumbuyuutarka tooska ah
Aasaasiga Naqshadeynta Webka - Koorsada Kumbuyuutarka tooska ah
Suuqgeynta Dijital ah - Koorsada Kumbuyuutarka ee Internetka
Sirdoonka Artificial - Koorsada Kumbuyuutarka ee Internetka
Noqo horumariye Android - Koorso Kumbuyuutar toos ah
Google AdWords - Koorsada Kumbuyuutarka tooska ah
HORDHAC SAYNISKA KOMBUUTARKA
Koorsadan kumbuyuutarka ah ee internetka bilaashka ah waxay lagama maarmaan u tahay bilowga inay qaataan ama dadka eber aqoon u leh barnaamijyada, koorsadu waxay kuu iftiimin doontaa kombiyuutarka aasaasiga ah iyo fikradda xisaabinta.
Markaad dhamaysato ka dib, waxaad aqoon ka heli doontaa horumarinta softiweerka, barnaamijyada u janjeedha shay, aasaaska Java iyo hababka loo adeegsado adeegsadaha.
Muddada Koorsada: 52 saacadood
Kani waa koorso kumbuyuutar ku saleysan oo Google ay siiso qof kasta oo doonaya inuu xirfad ku yeesho Google Analytics, waxaad ogaan doontaa sida loo hirgeliyo lambarka raadraaca, sameynta miirayaasha xogta, loo sameeyo loona maareeyo koonto.
Kadib marka la dhammeeyo, xirfadahaaga waxaa lagu dabaqi karaa ganacsiyada kala duwan sida bogagga taageerada, daabacaadda internetka, iyo bogagga jiilka hoggaaminta.
Mudada Koorsada: 4-6 saacadood
Barashada mashiinku waa laan ka mid ah sayniska xogta taasi waxay ku lug leedahay samaynta kumbuyuutarrada si ay u shaqeeyaan iyadoon barnaamij laga dhigin.
Koorsadani waxay kuu soo bandhigeysaa inaad ogaato farsamooyinka barashada mashiinka iyo hirgelinta ficil ahaaneed si aad uga heli karto inay adiga kuu shaqeeyaan ama u adeegsadaan inay xalliyaan dhibaatooyinka.
Muddada Koorsada: 56 saacadood
CODSIGA DADKA AJOOJIYAYAASHA
Koorsadani waxay ku bari doontaa inaad tahay naqshadeeye inaad ku midowdo barnaamijyada naqshadeynta sidaa darteed waad awoodi kartaa inaad abuurto oo aad qaabeeysid degel gebi ahaanba.
Muddada Koorsada: 60 saacadood
Koorsadan kumbuyuutarka ah ee bilaashka ah waa qayb ka mid ah barashada mashiinka iyada oo shabakadaha neerfaha ee farsamada iyo farsamooyinka ay dhiirrigeliyaan maskaxda bini'aadamka ay wax ka bartaan tiro badan oo xog ah laakiin waxay leedahay shahaado u gaar ah marka la dhammeeyo.
Markaad dhammeysato koorsadan, waxaad heli doontaa aqoonta-sida loo hirgeliyo barashada qoto dheer ee mashiinnada si loo xalliyo dhibaatooyinka cakiran.
Qaabdhismeedka xogta iyo ALGORITHMS
Koorsadani waxay kugu qalabeyn doontaa farsamooyinka lagama maarmaanka u ah xallinta arrimaha xisaabinta kala duwan iyo is-hirgelinta illaa 100 dhibaatooyinka koodhadhka algorithmic ee barnaamij kasta oo aad dooratid.
Kadib marka la dhammeeyo, xirfadahaaga waxaa lagu dabaqi karaa daawo oo ay raadin karaan shirkadaha tiknoolajiyada waaweyn.
Mudada Koorsada: 8 saacadood usbuucii muddo 3 bilood ah
HORUMARINTA CODSASHADA WEB
Koorsadu waxay ku bari doontaa sida loo abuuro websaydhka iyo codsiyada keydka macluumaadka ee PHP adoo u adeegsanaya SQL horumarinta xogta iyo sidoo kale shaqeynta JSON, jQuery, iyo JavaSript.
Mudada Koorsada: 11 saacadood usbuucii muddo 2 bilood ah
WEB OO LOOGU TALAGALAY AASAASIYO
Kani waa koorso hordhac ah oo ku saabsan qaabeynta webka waxaadna baran doontaa sida loo qaabeeyo degel. Waxaad awoodi kartaa inaad naqshadeyso boggaga internetka oo leh sawirro tayo sare leh, animations, soo bandhig waxyaabaha ku jira iwm.
HORDHAC KOOBKA QAADASHADA
Kahor intaadan bilaabin koorsadan waa muhiim inaad faham aasaasi ah kahesho IT-ga. Xisaabinta daruuriga ah waa keydinta iyo marin u helidda xogta iyo barnaamijyada internetka halkii aad ka heli lahayd kombiyuutarkaaga darawalka adag.
Koorsadani waxay ku habboon tahay xayeysiinta iyo horumarinta codsiyada.
Mudada Koorsada: 56 daqiiqo oo fiidiyow ah oo dalbanaya
Tani waa adeegsiga kumbuyuutarka ama aaladaha kale ee dhijitaalka ah si kor loogu qaado badeecadaada ama adeegyadaada internetka. Waxaad baran doontaa naqshadeynta iyo horumarinta tayada tayada leh ee soo jiidan karta macaamiishaada iyo macaamiishaada.
Muddada Koorsada: 40 saacadood
Koorsadani waxay ku bari doontaa sida loo codsado AI, ogow sida ay u shaqeyso iyo sida loo hirgeliyo si loo xalliyo arrimaha dhabta ah ee ururkaaga.
Muddada Koorsada: 4 toddobaad, 2-3 saacadood
NOQO HORUMAR KHUDBAD ANDROID
Koorsadani waxay kugu hagi doontaa inaad noqoto horumariye Android inkasta oo aadan lahayn xirfad barnaamij, waxaad awood u yeelan kartaa inaad ka horumariso barnaamijyada Android ka soo xoqidda ka dib dhammaystirka koorsada oo aad go'aansato inaad u shaqeyso shirkadaha ama aad bilowdo ganacsi kuu gaar ah oo noqda horumariye Android ah.
Muddada Koorsada: 12hr ee fiidiyowga la dalbado
Tani waxay ku bari doontaa sida loo isticmaalo xayeysiiska Google si loogu xayeysiiyo wax soo saarkaaga iyo adeegyadaada ama tan shirkad kale khadka tooska ah.
Waxaa laguu qalabeyn doonaa xirfadaha abuurista iyo qaabeynta xayeysiiska Google ee soo jiidan doona dadka isla markaana soo saari kara natiijo wax ku ool ah.
Koorsada Muddada: 54 saacadood
Gunaanad ku saabsan helitaanka koorsooyin kombiyuutar oo bilaash ah oo toos ah oo wata shahaadooyin
Barashada mid ama in kabadan koorsooyinka kumbuyuutarka ee kor lagu soo xusay ee khadka tooska ah waxay kaa caawineysaa inaad sare u qaado aqoontaada xirfadaha ku saleysan kumbuyuutarka. Mar dambe ma noqon doontid qof cusub ama bilow ah ka dib markaad si guul leh u dhammaysato koorsada xirfadda kombiyuutarka aad doorbidayso.
Maaddaama aad heysato shahaado koorsooyinkan kombiyuutarka ah, waxaad noqoneysaa mid xirfad leh, ma aha oo keliya shahaadooyinka keliya laakiin aqoonta dhabta ah sidoo kale.
Haddii aad tahay ganacsade kaligiis ganacsigiisu ku dhisan yahay mid ka mid ah xirfadahan dhijitaalka ah, waxaad hubaal ka dhigi doontaa lacag badan intaad gaarsiiso shaqooyin wanaagsan.
100 + Koorsooyinka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Kanada
Koorsooyinka Maareynta Khadka Tooska ah ee Ardayda
Jaamacadaha internetka ee leh Khidmadaha Lacagta Bilaashka ah
koorsooyinka kombiyuutarkakoorsooyinka dhijitaalka ahKoorsooyinka Kombuyuutarka ee Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Shahaadadakoorsooyinka kombiyuutarka ee internetkakoorsooyinka dhijitaalka ah ee internetka
Post Next:7 Akadeemiyadeed ee Kubadda Cagta ee ugu sarreeya England
January 10, 2022 at 4: 55 pm
Alan wuxuu leeyahay,
January 11, 2022 at 12: 08 pm
Pingback: 15 Yale Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo loogu talagalay Ardayda iyo Xirfadleyda
Pingback: Liiska Jaamacadaha Tooska ah ee Lacag La'aanta ah ee Ardayda Caalamiga ah 2021
Pingback: 9 -ka ugu sarreeya Shahaadooyinka Wasaaradda Onlaynka ee Bilaashka ah & Shahaadooyinka Seminarka 2021
Ajay Raju Ingale wuxuu leeyahay,
October 26, 2021 at 4: am 04
waxaan rabaa in aan ku biiro koorsooyinkan
Brian ojok wuxuu leeyahay,
September 3, 2021 at 8: 10 pm
Waxaan xiiseynayaa naqshadeynta shabakadda aasaasiga ah iyo horumarinta Codsiga shabakadda
Sideen u codsadaa
September 12, 2021 at 1: am 57
Kaliya guji xiriirinta dalabka ee qoraalka midabka leh.
Ajeet kumar singh wuxuu leeyahay,
September 3, 2021 at 8: am 20
shahaado degdeg ah, 2 daqiiqo
GAADI JOHN TERKUMA wuxuu leeyahay,
June 9, 2021 at 8: 11 pm
Waxaan xiiseynayaa sidee markaa u codsadaa?
June 9, 2021 at 10: 06 pm
Xiriirinta arjiga waxaa laga heli karaa kor.
Jhon wuxuu leeyahay,
June 9, 2021 at 11: am 48
Mawduucaagu waa wanaagsan yahay waan ku qancay
Helen J. Rosario wuxuu leeyahay,
February 15, 2021 at 1: 53 pm
Tani waa waxtar aad u badan mahadsanid!
Kamaalpreet Kaur wuxuu leeyahay,
November 7, 2020 at 4: am 38
Waad salaaman tahay ma ii sheegi kartaa sideen u dalban karaa koorsadan
Si fudud u guji xiriirinta dalabka koorsada aad doorbideyso
Charles wuxuu leeyahay,
November 5, 2020 at 8: am 17
Waxaan xiiseynayaa inaan barto koorsada koowaad, sidee ayaan u codsanayaa ??
November 8, 2020 at 8: am 56
Xiriirinta arjiga ayaa halkaas ku taal. Guji si aad u sii wado.
Festus Asuen wuxuu leeyahay,
February 20, 2021 at 4: am 11
Waxaan xiiseynayaa barashada xirfadaha aasaasiga ah ee kombiyuutarka.
VICKRAMAN A wuxuu leeyahay,
September 8, 2020 at 11: am 08
Waxaan xiiseynayaa koorsadan
Harshdeep hees wuxuu leeyahay,
October 23, 2021 at 5: am 41
haa waan xiiseynayaa